Formwork စက်ရုံ, ပေးသွင်းသူများ - China Formwork ထုတ်လုပ်သူများ
၁။ ထုတ်ကုန်နိဒါန်း ၆၃ သံမဏိကိုယ်ထည်စနစ်ပုံစံ၏ ၆၃ ခုသည်သံမဏိကိုယ်ထည်အထပ်သားတည်ဆောက်ခြင်းပုံစံပုံစံဖြစ်ပြီး ၄ င်း၏တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးမျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပြီးလုံး ၀ သို့မဟုတ်သီးခြားစီဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ 2. အသေးစိတ်အချက်များ ၁။ အကျယ်: ၆၃ မီလီမီတာအထပ်သား panel - 12mm 2.weight 2. 30kg / m2 3. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: ဆေးသုတ်ခြင်းမှုတ်ဆေး 4. ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း - အကြိမ် ၅၀ ခန့် ၅၀ ။ ဖိအား ၃၀-၄၀ KN / m2 ။ 6.Model နံပါတ်: LWSF1063 7.Material: သံမဏိ Q235 3.Product 1.Cost ချွေတာမှုများ 1) ရိုးရှင်းသောစုဝေး, set up နှင့် r ...
၁။ ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း： Luowen အသစ် ၆၃.၅ သံမဏိကိုယ်ထည်စနစ်သည်အဓိကအားဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်၊ အထပ်သား panel၊ ငြမ်းကွင်း၊ coupler၊ လျော်ကြေးပေးနိုင်သော waler၊ လည်စည်းလှံတံ၊ ရှုပ်ထွေးသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌နေရာချကာကွန်ကရစ်လောင်းကိုလောင်းရန်ပစ္စည်းကိရိယာကိုသုံးပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးနောက်ပုံသဏ္removedာန်ဖယ်ရှားသည့်အခါလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ ...
နိဒါန်း its လူမီနီယမ်ပုံသဏ္workာန်သည်ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်စွမ်းအားကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ ထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုနည်းပါးသည်။ လူမီနီယမ်ပုံစံပုံစံစနစ်တွင်နံရံများ၊ ကော်လံများ၊ ထုပ်များ၊ ပြားများ၊ သီးသန့် pin pin များကိုတင်းပလိတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ template စနစ်ကိုအစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်စံသတ်မှတ်ချက်အရွယ်အစားသည် ၁၀၀mm မှ ၄၅၅ မီလီမီတာ X ၁၈၀၀ မီလီမီတာ - ၂၄၀၀mm ဖြစ်သည်။ ခေါင်မိုးပုံစံ၏စံသတ်မှတ်ချက်အရွယ်အစားမှာ ၆၀၀ ဖြစ်သည်။
နာမည်: ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်ရှိအထပ်သားအရွယ်အစား - ၁၂၂၀x ၂၄၄၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂၅၀ x ၂၅၀၀ မီလီမီတာ ETC အထူ - ၁၂/၁၅/၁၈ မီလီမီတာ ETC Core - ပေါ့ပလာ၊ ယူကလစ်ပင်၊ သစ်မာ၊ အစိုင်အခဲကော် - MR, MELAMINE, WBP အသုံးပြုမှု: ဆောက်လုပ်ရေး၊ အထုပ်အပြင်ထွက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အထပ်သားအသုံးပြုခြင်းမျိုး။ Formwork အထပ်သားကို Shuttering Plywood ဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်အထပ်သား / MDO နှင့်မျက်နှာကျက်ထားသည့်အထပ်သား / Wood veneer မျက်နှာပြင်အထပ်သားများကို Form Work အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Formwork အထပ်သား၏ကော်သည် WBP ကော်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်စီးပွားရေးလိုအပ်တယ်ဆိုရင် ...
ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, သတ္တု Cuplock ငြမ်း, Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း,